အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Etoshine 60 က ဆင်တုတ်ကွေး တကယ်ပျောက်လား – Wun Yan
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Etoshine 60 က ဆင်တုတ်ကွေး တကယ်ပျောက်လား
Etoshine 60 က ဆင်တုတ်ကွေး တကယ်ပျောက်လား
ခုတလော ဆိုင်မှာ ဆင်တုတ်ကွေးပျောက်တယ်ဆိုပြီး တော်တော်လေးကို ရောင်းရနေပါတယ် … တချို့တွေက တလွှဲအယူအဆတွေ နဲ့ သောက်နေကြလို့ပါ .. ဆင်တုတ်ကွေးစဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ နီးစပ်ရာဆိုင်မှာ Etoshine (Etoricoxib) ကိုပြေးဝယ်ကြတယ် ထင်တယ်.. အမှန်တော့ ဆေးက အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးပါ.. တုတ်ကွေးပျောက်ဆေး မဟုတ်ပါဘူး .. ဒီဆေးသောက်ရင် ပျောက်တယ်ဆိုတာ ဆင်တုတ်ကွေးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အကိုက်ခဲပျောက်တာပါ ..
တကယ်ပျောက်ရဲ့လားဆိုတော့ ဆင်တုတ်ကွေးကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေကိုတော့ ပျောက်ပါတယ် ..
ကလေးတွေရော သောက်လို့ရလား ???
အသက် 16 နှစ်အထက်မှ စသောက်လို့ရမှာပါ ..
(ကလေးငယ်လေးတွေကို လုံးဝမတိုက်ပါနဲ့ )
အစာစားပြီးမှ ၁ လုံးပဲသောက်ရမှာပါ။ တစ်ရက်ကို ၁ လုံး နှုန်းနဲ့ ၁ ကြိမ်ပဲသောက်ရမှာပါ။ (မြန်မြန်ပျောက်ချင်ဇောနဲ့ တစ်ရက်ကို ၃ ကြိမ် မသောက်သင့်ပါဘူး .. အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးပါ ဆေးပြင်းပါတယ်) အစာအိမ်ရောဂါ ရှိတဲ့သူများ အစာမစားဘဲ လုံးဝမသောက်သင့်ပါဘူး။
Overdose သောက်ရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ ??
Overdose ဆိုတာ ပျောက်ချင်ဇောနဲ့ တစ်ရက်ကို သုံး လေးကြိမ်သောက်တာပါ .. ( လိုအပ်လို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာကို မဆိုလိုပါ ) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ တစ်ရက်ထဲ သုံးလေးကြိမ်သောက်သုံးတာမျိုးတွေကို လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။
အလွန်ကျွံသောက်ရင် အာခေါင်တွေခြောက်လာမယ် / အစာစားချင်စိတ်တွေ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တွေ လျော့လာမယ် / လည်ပင်းတွေနာမယ် / မောပန်းလာမယ် / လေပွမယ် / ဝမ်းချုပ်မယ် ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီထက်ဆိုးရင် အစာအိမ်နာတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ ဆေးဆိုင်ပြေးပြီး Etoshine ဝယ်သောက်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ .. ဆေးပြင်းပါတယ်.. အခန့်မသင့်ရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားမှသာ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်ပါ..
တလွှဲအယူဆတွေနဲ့ မသောက်စေချင်ပါဘူး။ ဝိုင်းပြီး Share ပေးကြပါဦး။ ဆေးတွေ အလွန်အကျွံ သောက်မိနေမှာစိုးလို့ပါ။
𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐨𝐧 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐜𝐚𝐫𝐞
By ရွှေခြင်္သေ့ (ဆေးဆိုင်) (လွိုင်ကော်)
ခန္ဓာကိုယ်မှ အဖုအကျိတ်တွေကို ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်း
အဆုတ် အတွင်းရှိ အဆိပ်အသောက်များကို သန့်စင်စေသော ကန်စွန်းရွက်ပြုတ် ဟင်းချို